Previous Article NOA, NGO Enyela Ndị Ekpenta Nri
Next Article Anambra Ga-Achọ Ijeri Abụọ Maka Ụgwọ Ọrụ Opekatampe
N'ụbọchị dị otu a n'ala Naijiria, ndị ọlụ na-akwado gaa n'ámá egwuregwu na steeti ha dị iche iche ebe ha ga-anọ were mee mmemme a. Ha ga-akwụ na-ahịrị na-ahịrị dịka okpuru ọchịchị me obodo ha siri dị.
N'ime mmemme a, onyeisi ndị ọlụ na steeti ahụ na aka na-achị steeti ahụ ga-agwa ndị ọlụ nọ na steeti ahụ okwu site na ito ha, inye ha ndụmọdụ, tinyere ihe nrita dị iche iche. Ịkụ ngazi n'eze na ọtụtụ ihe ịkpa ọchị na obi añụrị ndị ọzọ dịka egwu na ihe ngosi dị iche iche ga-eso.
Na nke afọ a, onye mịnịsta na-ahụ maka ọlụ, Dọkịta Chris Ngige, toro ndị ọrụ maka ihe ndị ha n'etinye na mmepe obodo anyị. Ọ gakwara n'ihu were too ha maka ume ha niile.
Ngige, n'okwu ya ụbọchị Tuzdee, sịrị na ọchịchị Muhammadu Buhari na-alụsi ọrụ ike iji were hụ na akwalitere ọnọdụ ndị ọrụ na ọnọdụ akụnụba.
Dịka ọ siri kwuo, "A na m egosi obi ụtọ m na ekele m na mmemme nke Ụbọchị Ndị Ọrụ nke Afọ Puku Abụọ na Iri na Iteghete. Isiokwu nke afọ a bụ "Narị Afọ ọzọ iji chọọ ọrụ, nkwanyeugwu na iwu obodo na Naijiria" sonyere ebumnobi na mbọ Onyeisiala Muhammadu Buhari na agba iji were kwalite ọnọdụ ndị ọrụ, ma were hafee ezi ọnọdụ akụnụba nke ga-eme nri abụrụzie atụrụ tawa n'obodo anyị".
"Ihe mmemme nke afọ a jiri pụọ iche bụ maka ndakọrịta ọ dakọrịtara ya na mmemme nke otu narị afọ nke otu ndị ọrụ n'ụwa niile, nke Naijiria bụ obodo mbụ ha nwere isi ụlọ ọrụ afọ iri isii gara aga."
"Dịka m na-aja ụnụ ike maka ntachiobi ụnụ na ịbụ ndị ọrụ ala anyị na ihe niile ụnụ na-etinye maka mmepe obodo anyị, nke a bụ n'ihi Onyeisiala Naijiria na-akwado ndị ọrụ bụ onye a ga-ebugara ụkpa ekele."
N'ozi onye bụbu osote onyeisiala n'oge gara aga, Atiku Abubakar na Onyeisi Ụlọomeiwu ala anyị Bukola Saraki, ha tokwara ndị ọrụ maka mbọ ha na ụtụ ha na-atụnye n'ịhụ n'ọrụ mmepe na-aga n'ihu n'obodo anyị.
Saraki n'okwu site n'aka onye ndụmọdụ ya pụrụ iche (n'ebe mgbasa ozi dị), Yusuph Olaniyonu, kwuru na ndị ọrụ n'obodo anyị kwesiri otuto maka ịbụ ezi ụmụ afọ.
O kwuru, "O nweghị obodo ga-emepe ma ewezụga ndị ọrụ ume dị ma werekwa obi ha niile arụ ọrụ. Ọ bụ ihe dị mma ka ekwuo na ndị ọrụ bụ isi ihe ji akụnụba anyị, maka na o nweghị atụmatụ gọọmenti, agbanyeghị otu ọ dị, ga aga n'iru ma ewepu itinye uchu na nrụkọ ọrụ ọnụ nke ndị ọrụ bụ ndị ga-ahụ n'ihe gọọmenti kwuru bụ nke emere.
"Ebe mụ na ndị ọrụ na ndị isi ha kparịtaragoro ụka, a ga m ekwu n'ejighị egwu na ndị ọrụ obodo anyị bụ ndị kachasị mma na Afrịka.
N'okwu ya, Atiku kwuru na ndị ọrụ ga-ewulite ọnọdụ akụnụba juru eju.
Onye ahụ zọrọ ọkwa Onyeisiala na ndọrọndọrọ ọchịchị Peoples Democratic Party na ntụliaka gara aga kwuru, "N'afọ ndị a, ọtụtụ otu ndị ọrụ na Naijiria arụọla ọrụ pụrụ iche n'etiti gọọmenti na ndị mmadụ, nke kachasi dị nso bụ na ganịganị ha kpọrọ maka ịkwalite ọnọdụ ụgwọ ọnwa opekatampe ruo puku narị naira iri atọ".
"A na m ekele otu ndị ọrụ maka ịnweta nke a ma kwenye na site n'ụdị itinye uchu a, ha ga-akwalitekwa ọnọdụ obibi ndị ọrụ."